Mifaningo-paka ny tany, ny teny, ny tena… | NewsMada
Mifaningo-paka ny tany, ny teny, ny tena…
Par Taratra sur 20/02/2016
21 febroary rahampitso. Andro iraisam-pirenena ho an’ny tenin-dreny na tenindrazana indray… Ny nahatonga izay Andro iraisam-pirenena izay? Ho fahatsiarovana ireo mpianatra maty notifirin’ny polisy tany Dacca, Renivohitr’i Bangladesh ankehitriny. Nitaky ny fampiasana ny tenindrazany, ny bengali, izay nambara ho tenim-pirenena faharoa tany Pakistan ireo mpianatra tany an-toerana.
Fitiavan-tanindrazana ny ady ho an’ny tenindrazana, mila isiana sy iainana isam-pofonaina: isam-batan’olona, amin’ny fiainana rehetra. Mifaningo-paka ny tany sy ny teny: ipoirana sy ivelaran’ny teny ny tany na ny firenena isiana, anisan’ny mandrafitra ny maha firenena ny firenena ny teny. Tsy afa-misaraka amin’ny tena. Ny tena no miaina sy mampiasa ny teny. Miankina amin’ny tena izany ny tany sy ny teny.
Ho an’ny firenena toa an’i Madagasikara tsy mba niainga tamin’ny sivilizasion’ny soratra, araka ny filazan’ny mpandinika sasany: harem-bevava ny teny, mirakitra ny kolontsaina, foto-pisainana… “Ny fiteny malagasy no zavatra rehetran’ity firenena ity“, hoy Ravelojaona izay ao amin’ny Firaketana, taona 1937. “Toeran’entana” ho an’ny Malagasy ny teny noho tsy ny fananany ny soratra na sary, ohatra, tany an-tendrony.
Hatramin’izao, manan-danja izay toeran’ny teny izay, na eo aza ny hoe: ny teny, mandalo; ny soratra, mitoetra. Ny teny atao, mora tsiahivina; ny teny malemy, mahamora harena… Mby aiza izany amin’izao? Na ny tany, na ny teny, na ny tena… Ny tany mbola iadiana amin’ny vahiny, ny teny ihafiana mitaha amin’ny an’ny hafa, ny tena ao anaty fahasahiranana lava… Indray simba miadalana fa mifaningo-paka?
Anisan’ny iharam-pahavoazana izao ny teny noho ny fahasimban’ny tany sy ny tena, raha ny zava-nitranga sy niainana tato ho ato izay. Eo koa ny hoe fanatontoloana, fanamarinan-tena sy fialan’ny malain-kisahirana. Izay tompon’ny teny no tompon’ny tena? Na ny tany aza… Tsy anisan’ny fanoitran’ny tena eto amin’ny tanin’ny tena ve ny teny amin’izany? Fitiavan’ny tena tanindrazana ny fandalana tenindrazana…